Mutemo weGerman pamusoro peManagement yeZvekudya Nezvinhu, unozivikanwawo seMutemo paManagement weKudya, Fodya Zvigadzirwa, Zvizoro uye Zvimwe Zvinhu, ndiro rinonyanya kukosha gwaro repamutemo mumunda wehutano hwehutsanana hwezvokudya kuGerman.
Ndiwo muyero uye musimboti weimwe yakasarudzika mitemo yehutsanana hwechikafu nemirau. Mirau pane chikafu cheGerman kuti uite iyo yakajairwa uye yakasarudzika mhando yezvigadzirwa, zvese mune yeGerman musika chikafu uye zvese zvine chikafu
Izvo zvinhu zvine chekuita nazvo zvinofanirwa kutevedzera zvayakakosha zvayakapihwa. Zvikamu 30, 31 uye 33 zveMutemo zvinotsanangudza zvinodikanwa zvekuchengetedzwa kwemidziyo inosangana nechikafu:
LFGB Chikamu 30 chinorambidza chero chinhu chine zvinhu zvine chepfu zvine njodzi kuhutano hwevanhu;
LFGB Chikamu 31 chinorambidza zvinhu zvinokanganisa hutano hwevanhu kana kukanganisa kuoneka (semuenzaniso, kutama kwemavara), hwema (semuenzaniso, ammonia kutama) uye kuravira (semuenzaniso, aldehyde kutama) kwechikafu
Chinjana kubva kuzvinhu kuenda kuchikafu;
LFGB Chikamu che33, Zvinyorwa zvakasangana nechikafu zvinogona kusashambadzirwa kana ruzivo rwacho ruchitsausa kana kumiririra kwacho kusiri pachena.
Uye zvakare, iyo yeGerman njodzi yekuongorora komiti BFR inopa yakakurudzirwa zviratidzo zvekuchengetedza kuburikidza nekudzidza kwega kwega chikafu chekudyidzana. Zvakare uchifunga nezve zvinodikanwa zveLFGB Chikamu 31,
Pamusoro pezvinhu zvedongo, zvese zvekudyidzana zvekudya zvinotumirwa kuGerman zvinodawo kupasa bvunzo yekunzwa kwechigadzirwa chose. Pamwe pamwe nezvinodiwa zvehurongwa hweLFGB, iyi mirawo inoumba chiGerman chikafu Kutaurirana zvinhu zvinodzora system.